Waa tee Kooxda ka dheesha Premier League ee sida dhabta ah u doonaysa inay la saxiixato Kylian Mbappe?? – Gool FM
(England) 17 Nof 2020. Waxaa jirta koox ka dheesha horyaalka Premier League isla markaana ka mid ah kooxaha waa weyn ee England oo si dhab ah u doonaysa saxiixa Kylian Mbappe.
Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa la soo warinayaa inay si dhab ah u xiiseynayso Kylian Mbappe, waxaana ay isku diyaarinaysaa inay maalgelin sameyso oo ay la soo wareegto xiddiga kooxda Paris Saint-Germain.
Reds ayaa si joogto ah loola xiriirinayay Mbappe sanadkii la soo dhaafay kaddib markii xiddiga reer France uu si maldahan u sheegay inuu jeclaan lahaa inuu ka hoos shaqeeyo Tababare Jurgen Klopp.
Maalgelinta heshiiska xiddigga weyn ayaa noqotay mid khiyaano leh, laakiin Jariiradda The Times ayaa soo jeedinaysa in Liverpool ay u furan tahay fikradda ah inay iibiso mid ka mid ah Mohamed Salah, Roberto Firmino ama Sadio Mane si ay gacan uga geystaan soo uruurinta xoogaa lacag ah.
Inkastoo loo maleynayo inuu diiday saddex dalab qandaraas oo kala duwan, taasoo la micno ah inuu noqon doono mid xor ah sanadka 2022-ka, haddana Mbappe ayaa la sheegay inay PSG ku qiimeynayso ku dhowaad 161 milyan oo gini.
Real Madrid ayaa sidoo kale la rumeysan yahay inay xiiseynayso 21-sano jirkaan, kaasoo dhaliyay 97 gool, islamarkaana loo diiwaan galiyay 58 caawin 132 kulan oo uu u saftay kooxda reer France.
Luis Suarez oo uu ku dhacay Korona Fayras & Kulammada waa weyn ee uu seegi doono oo la sii ogaaday